Ixesha kunye nabahlobo 12
Ukufundisa naluphi na uhlobo kuthwala ixabiso layo ngaphakathi okanye ngaphakathi kulo. Zonke iimfundiso kufuneka zigwetywe ngenxa yokuba zilungele ntoni, kungakhathaleki ukuba zivela phi na okanye ziphi na igunya. Kuxhomekeka kwisakhono salowo ufumana imfundiso yokuba iyakwazi na ukugweba imfundiso ngexabiso layo lokwenyani. Ezinye iimfundiso zisebusweni babo konke okukhoyo kubo, ngelixa ezinye zinokujongwa, ziqwalaselwe kwaye zilungiswe ngaphambi kokuba intsingiselo yokwenyani iqondwe. Ubukhulu becala ubugqwirha busebenza buze buqhubu kumabala okuhamba, kwaye abaphulaphuli bafumana ezi zinto ngokumangalisayo. Ngamaxesha athile isinikezeli sinokufumana okanye siphindaphinde intetho yentanda-bulumko, ebizwa ukuba ithiwe thaca lulawulo oluthile. Xa ukufundiswa kwesimo sefilosofi okanye indalo yesimo sezulu inikezelwa ngokusebenzisa i-medium, kunokuthiwa ukuba kuvela kuyo nayiphi na i-eph ephakathi ephezulu, okanye kwendoda esisilumko ehlala emzimbeni, okanye kulowo ofunde ukwahlulahlula kwaye uphile ngokuhlukileyo emzimbeni ophathekayo, okanye isenokuba ivela kulowo ubuhambileyo obu bomi, kodwa azikhange azihlukanise nomnqweno wakhe womzimba oya kuthi ke umdibanise kunye nehlabathi kwaye ongakhange abe phantsi kwembeko yokudlula komntu oqhelekileyo ngexesha nasemva kokuba usweleke.
Ukufundisa okuxabisekileyo ngeli xesha kunokuvela kuyo nayiphi na imithombo yolwazi, ngokusebenzisa i-medium, nokuba kungemfihlo okanye akunjalo. Kodwa akufuneki ukuba ukuxabiseka kuxabiseke kuba kuvela kumthombo obonwa njenge "gunya".
Sithetha ukuthini xa sisithi "abafileyo?" Umzimba uyafa kwaye uhlakazekile. Ayisebenzi emva kokuba ifile kwaye ifom yayo yahlakazeka yaya kumoya omdaka. Ukuba “ngabafi” kuthetha iminqweno yobuqu, singathi baqhubeke ixesha, kwaye loo minqweno yobuqu iyaqhubeka kwimizamo yabo yokufumana izinto okanye izinto. Ngamnye kwaba bantu abafileyo kufuneka asebenzele iziphelo zakhe, kuba njengoko ngamnye esebenza umnqweno wakhe awukhathalelanga ukufumana iziphelo ezithile zabanye. Ukuba kwelinye icala, “ngofileyo” kuthetha ukuba eli lungu lobuqu eliqhubeka kubomi liye ebomini, singatsho ukuba singaphila emva kokufa kwilizwe leenkolelo zalo ezakhelwe yena, kunye nokonwaba komntu ngamnye , okanye iinjongo zayo zinokuba zibandakanya ukubandakanya kwiinjongo zabo ubomi babanye, kwimeko leyo abo bashiyekileyo baya kuphila baphume okanye basebenzise iinjongo ababezenzile ngexesha lokuphila emhlabeni. Lomhlaba yindawo yomsebenzi. Abafi badlula kwimeko yokulungiselela ukubuyela kwabo kweli lizwe ngomsebenzi. Kwizikrelem ezingafiyo ezisebenza ngale mizimba yenyama kweli lizwe, abanye basebenza kweli lizwe ukufumana iziphelo ezithile njengabantu, ngelixa abanye besebenza ngokudibeneyo ukufikelela esiphelweni. Iklasi nganye nganye isebenza ngokuzingca ngesiphelo sayo. Elinye iklasi lisebenza ngokukodwa kwaye ngokuhlangeneyo ukwenzela konke oko. Oku kusebenza kuzo zombini ezi klasi ezingafumananga ukungafi, okuthetha ukungafi nokungabinachaphaza kunye nokuqhubeka okukhoyo kuwo onke amazwe kunye neemeko. Ezi zinto zifunyanwe kukungafi kubomi bangoku zinokusebenza emva kokufa komzimba ngenxa yezinto ezizezazo okanye zonke izinto zilungele konke. Obu bomi yindawo yomsebenzi kweli lizwe kumntu oqhelekileyo. Kwimeko emva kokusweleka akasebenzi, njengoko lilixesha lokuphumla.
Ukutya kuyimfuneko ukugcina ubukho bomzimba walo naluphi na uhlobo. Amatye, izityalo, izilwanyana, amadoda nezithixo zifuna ukutya ukuze ziqhubeke zibakhona. Ukutya okukodwa asikokutya kwabo bonke. Ubukumkani ngalunye busebenzisa njengokutya kobukumkani obungaphantsi kwayo kwaye bufumaneka njengokutya kobukumkani obungaphezulu kwayo. Oku akuthethi ukuba umzimba wumbi wobukumkani obukukutya kolunye, kodwa ukuba eyona nto ingumzimba kukutya okuya kuthathwa kubukumkani obungezantsi okanye bunikelwe ebukumkanini obungaphezulu. Izidumbu zabantu zisebenza njengokutya komhlaba, izityalo, iimpethu kunye nezilwanyana. Umbutho osebenzise ukutya uqhubeka ubukho bawo ngokutya, kodwa ukutya kwento enjalo ayikokutya okufanayo kwakusetyenziselwa ukuqhubeka kubukho bomzimba wenyama. Emva kokufa indoda yokwenene idlulela kwimeko yokuphumla nokonwaba, kuphela emva kokuba ezahlule kwiminqweno yobomi bakhe bokwenyama. Ngokudibana kwakhe nale minqweno ngokudibana nehlabathi lezinto ezibonakalayo uzinika le minqweno yomntu kwaye le minqweno ithatha inxaxheba kwingcamango ethile, kodwa kuphela kwinto yokuba ibhotile yeglasi ithatha ivumba lesiqholo elikuyo. Ezi zihlala zizinto ezibonakalayo emva kokuba umntu efile. Baqhubeka nobukho babo ngokutya. Ukutya kwabo kuthathwa ngeendlela ezininzi, ngokobume bohlobo oluthile. Ukuphucula umnqweno kukuphindaphinda. Oku kungenziwa kuphela ngokufumana umnqweno othile ngokusebenzisa umzimba wenyama womntu. Ukuba oku kutya kuyaliwa ngabantu abaphilayo umnqweno uyazitshisa kwaye uyaphela. Iifom zokunqwenela ezinjalo azidli ukutya komzimba, kuba azinakho izixhobo zokusebenza zokulahla ukutya komzimba. Kodwa umnqweno kunye namanye amalungu, anjengezinto zasendalweni, aqhubekisela phambili ubukho bazo ngevumba lokutya. Ke ngale ndlela banokuthiwa baphila ngevumba lokutya, olu lolona hlobo luqatha lokutya abakwaziyo ukuzisebenzisa. Ngenxa yale nyani, iindidi ezithile zezinto ezisisiseko kunye neminqweno yomntu eyonakalisiweyo iyatsalwa kwiindawo ezithile zezivumba ezivela kukutya. Iphutha elingaphezulu kwesiqhumiso liya kuba lingakumbi kwaye lihambise inkangeleko yalo izinto zangaphambi komntu, izinto eziphambili, iziseko zemo yendalo ziyatsalwa kwaye ziyangqinelana ngokutshiswa kwesiqhumiso. Ukutshiswa kwesiqhumiso kutsala okanye ukugxotha ezo klasi okanye izinto ngokobunjani bazo. Ngale ndlela “abafileyo” kunokuthiwa bayatya. Kwindlela eyahlukileyo imigaqo-siseko ehambileyo ehlala ezulwini okanye kwimeko yakhe yokuphumla kunokuthiwa uyitya ukuze uqhubeke nobukho bakhe kwelo lizwe. Kodwa ukutya ahlala khona zezona ngcinga zilungileyo ebomini bakhe; Ngokwenani leengcinga zakhe ezilungileyo, ulungiselela ukutya awuthobelayo emva kokuba efile. Le nyaniso yafanekiselwa ngamaYiputa kuloo nxalenye yencwadi yawo yaBafileyo apho kuboniswa ukuba umphefumlo emva kokuba udlule kwiholo leNyaniso ezimbini kwaye usindwa ngumlinganiso, udlulela emasimini ka-Aan Ru , apho ifumana khona ingqolowa yokuhluma iimitha ezintathu ezinesihlanu kunye nesixhenxe ukuphakama. Umkileyo anganandipha kuphela ixesha lokuphumla, ubude bawo obugqitywe ziingcamango zakhe ezilungileyo ngelixa esemhlabeni.
Ewe kunjalo, kodwa ngokobunjani bomzimba obuza kuwunxiba, kwingcamango ebunjiweyo kunye neyomlinganiswa abamele ukuwuveza. Iingubo zayo nayiphi na indoda okanye ubuhlanga yimbonakalo yeempawu zomntu okanye zabantu. Ngaphandle kokusetyenziswa kweengubo njengokhuselo kwimozulu, zibonisa izinto ezithile ezizithandayo kunye nezobugcisa. Esi sonke isiphumo sengcinga yakhe. Kodwa ukuphendula lo mbuzo ngqo, singathi kuxhomekeka kwindawo apho abafileyo bakhoyo okanye banxibe iimpahla. Xa inxulunyaniswa ngokusondeleyo kunye nengcinga yehlabathi eliqhambileyo liya kugcina imikhwa kunye nezithethe zelizwe apho lathuthelwa khona, kwaye ukuba loo nto ishiyekileyo inokubonwa ivela kwizinxibo ezikufanele kakhulu ukuthanda kwayo. Ingabonakala kwisinxibo esinjalo kuba nayiphi na ingcinga yayo, ukuba iya kuba njalo, kunye neempahla umntu aza kuzinxiba ngokwemvelo kwingcamango zakhe, ngezo ebezisebenzisa ebomini. Ukuba, nangona kunjalo, iingcinga zangasekhoyo zinokutshintsha ukusuka kwimeko ethile ziye kwenye, uya kubonakala kwingubo abeya kuyicinga, eyifanele imeko. Nangona kunjalo, ngenxa yokucinga kwabantu, iimpahla zenzelwe ukufihla iziphene okanye ukuphucula imeko, ubukhulu becala njengokuzikhusela okanye ukuzikhusela kwimozulu engentle, kodwa kukho indawo umntu adlula kuyo emva kokuba efile nalapho abonwe khona. njengoko anjalo ngokwenene hayi njengengubo ziya kumenza abonakale enjalo. Le ndawo isekukhanya kothixo wakhe wangaphakathi, ambona njengoko anjalo kwaye egweba ngokwendlela efanelekileyo. Kule ndawo umntu akafuni zonxiba okanye kukhuselwa, njengoko engathobanga okanye echaphazeleka ziingcinga zabanye abantu. Ke “abafileyo” kunokuthiwa banxiba iimpahla ukuba bayazifuna okanye bafuna iimpahla, kwaye kunokuthiwa banxibe iimpahla ezifunekayo ukukhusela, ukufihla okanye ukukhusela imizimba yabo ngokwemeko abakuyo.
Emva kokuba umntu efile umzimba wakhe ugcinwe ngokuqinileyo kwibhokisi yakhe eyenziwe ngamaplanga, kodwa isimo somzimba, isidumbu somzimba, asihlali kuloo ndlu. Iyatshabalala njengoko umzimba esenza malunga nengcwaba; kakhulu kwicala lomzimba. Ngokubhekisele kwisahlulo somzimba, ihlala phantsi kweemeko ezinjalo okanye iimeko njengoko zihlala zihambelana nendalo. Ukuba umbono wayo ophambili ubenguwe ukutsala umdla kwindlu ethile okanye kwingingqi ethile, ikhona ingcinga okanye ikhona. Oku kusebenza kumzimba womnqweno, kodwa iqabane elihlala kwilizwe elifanelekileyo emva kokuba lifile-elihlala libizwa ngokuba lizulu-lingaze lihlale endlwini, ukuba lithe lacinga indlu ngenxa yokuba linokupeyinta nawuphi na umfanekiso owuthandayo. Indlu ukuba kukho nantoni na ebeya kuhlala kuyo iya kuba yindlu efanelekileyo, eyakhelwe ngumbono wayo, hayi ngezandla zabantu.
Ukufa ngokwako bubuthongo, kwaye bubuthongo obude okanye obufutshane njengoko umbutho osebenze kweli lizwe ulifuna. Ukulala lixesha lokuphumla, ukunqunyanyiswa okwethutyana kwizinto ezinokusebenza kuyo nayiphi na indiza. Ingqondo ephezulu okanye i-ego ayilali, kodwa umzimba okanye imizimba esebenza ngayo ifuna ukuphumla. Olu phumlo lubizwa ngokuba bubuthongo. Ke umzimba wokwenyama, onke amalungu alo, iiseli kunye nee molekyuli zilala okanye zinexesha elincinci okanye elide, ezibavumela ukuba bazilungiselele ngokwamandla nangombane kwimeko yabo.